E nwere ụfọdụ ndị na--ezi ihe na ihe ụfọdụ. E nwere basketball egwuregwu bụ ndị na-arụ nke bụ otu n'ihi na ọtụtụ afọ ma na ha rụchaa ọkwá ha ojuju na obi ụtọ. Ha chọrọ egwu egwuregwu ha hụrụ n'anya na ha chọrọ ime ka a ọrụ na-eme ya. Ha we me ya na ha na-ezi. E nwekwara ndị ọzọ, dị ka Michael Jordan.
Michael Jordan bụ ihe karịrị ezi. Ọ bụ oké - ọtụtụ na-arụ ụka, onye kasị ukwuu. Michael Jordan bụ akwụsịghị naanị egwu ya ma na-eme ka a ọrụ. Mike chọrọ ịbụ mma karịa mmadụ nile. O nweghị afọ ojuju na-eme ka ọ, na ọ chọrọ ka ndị kasị mma. Ya mere, ọ nọrọ na-amụ ya mgbe e mesịrị ka onye ọ bụla ọ rụkwara ọrụ ike karịa onye ọ bụla. Na ihe a niile n'ihi na ọ na miri chụpụrụ site na ọchịchọ iti gị. Ị hụrụ nke a na ya nnukwu ọnụ ụlọ ndị ama ama okwu. Ọ ka nọ na ịma aka folks na ya asọmpi ọdịdị wee si dị ka mgbe tupu. Ọ chụpụrụ.
Ị nwekwara ike ikwu banyere artists dị ka Lil Wayne. E nwere ụfọdụ rappers bụ ndị dị nnọọ chọrọ ịbụ ma ama na-eme ka ego. Ọ bụghị Lil Wayne. Ọ chọrọ ịbụ onye kasị ukwuu niile oge. ọ na-eri, -ehi ụra, na Mmụọ ya na music. Ọ na-ege ntị onwe ya. O bi studio. Ọ bụ eleghị anya echefu ihe Rhymes karịa ọtụtụ rappers dere. N'ime uche ya, ọ ga-enwe ike idozi ihe ọ bụla na-erughị kasị ukwuu niile oge. Gịnị mere? N'ihi na ọ na-miri chụpụrụ site a ọchịchọ-kacha mma.
Nọmalị mgbe ndị mmadụ na-ekwu okwu banyere a chụpụrụ, ha pụtara ihe dị ka. Ha na-ezo aka ndị na-ọrụ na-abara, ma ọ bụ kpebisiri ike ịga nke ọma na ubi ha. Ma è nwere ihe na-a chụpụrụ maka Christian? Gịnị ka anyị ga-amanye m na chụpụrụ site? Ihe a ga-akwọ ụgbọala ahụ Christian na ebe kwesịrị ya na-akwọ ụgbọala anyị? Ọma m na-eche na anyị ga-ahụ azịza nke ajụjụ a ná Ndị Rom 12.
Mgbe emejuputara ayak ozizi ndị Gospel na Rom 1-11, Paul atụgharịa na-agwa anyị otú anyị kwesịrị now ebi. The mbụ iri na otu isi nwere ihe anyị kwesịrị ikwere, otú anyị na-echekwa, ihe Chineke mere ná Christ, ihe Chineke ga-eme Christ, etc. Ugbu a, n'isi 12, Paul na-eme ka a ngụkọta agbanwe gaa na-agwa anyị ihe anyị kwesịrị ime. Paul eme nke a n'Akwụkwọ Ndị Efesọs na Ndị Kọlọsi kwa.
N'ihi ya, m chọrọ ka anyị lee ihe odide a, na-ele anya na ihe atọ anyị kwesịrị ime na ìhè nke ihe Chineke kpugheere ebe a.
M ịrịọ gị mere, ụmụnna, site obi ebere nile nke Chineke, enyefe ahụ unu dị ka a bi àjà, nsọ na nke dị Chineke mma, nke bụ ime mmụọ gị ofufe. Adịghị o kwekọọ ụwa a, kama gbanweenụ site na mmeghari ohuru nke uche gị, na site anwale ị nwere ike ịhụ ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma ma zukwara okè. (Ndị Rom 12:1-2)
m. A ga-chụpụrụ site Ebere
Ya mere, mgbe Pọl na-eme ka a nnofega, ọ arịọ ndị ha na anyị. Ọ na-agbasi arịọ, O ji ikike na-agba anyị ume ibi ndụ a ụfọdụ ụzọ. Ma tupu anyị anya na ihe ọ bụ agba anyị ume ime, Achọrọ m anya na ụzọ o arịọ ndị ha na anyị.
M ịrịọ gị mere, ụmụnna, site obi ebere nile nke Chineke… (Ndị Rom 12:1a)
Na-agwa anyị otú anyị kwesịrị ibi ndụ Paul ekwughị anyị kwesịrị ibi ndụ a ụfọdụ ụzọ n'ihi na "Anyị chọrọ ịbụ onye kasị ukwuu ma ọ bụ kasị nsọ na,"Ma ọ bụ n'ihi na" ọ bụ otú a upstanding òtù nke otu kwesịrị-adị ndụ,"ma ọ bụ, "Nne anyị kụziiri anyị ka mma karịa,"Ma ọ bụ ọbụna, "Ka Chineke ga-amasị gị." Ọ dịghị, ọ na-enye anyị a dị iche iche ụdị na-akpali.
E nwere nnukwu ihe dị iche n'etiti ihe ụwa a na-chụpụrụ site, na ihe anyi ga na chụpụrụ site. Na nso nso a, m kwuru okwu a nwanyị ahụ bụ akụkụ nwe azụmahịa na ya na onye òtù ọlụlụ malitere ọtụtụ afọ gara aga. Ọ gwara m banyere azụmahịa na otú ike ọ na-arụ ọrụ. Mgbe ahụ ọ gwara m banyere nile ụmụaka o nwere na otú ukwuu ọ hụrụ ha n'anya. Ọ si ya ka ndụ ya niile banyere azụmahịa ọ malitere na ụmụ ya. Na ọ na-atụrụ ndị dị ka ya isi n'anya, na ya kwaliri-eme ihe nile ọ na-eme.
Ugbu a, na o yiri ka ezi ihe na-ekwu. Ọ hụrụ ya ụmụaka na ọrụ ya. Ma m chọrọ ka ị mara na Ndị Kraịst a ga-akpali ihe miri. N'ihi na Christian anyị akpali mgbe akwụsị na ihe ọ bụla dị n'ụwa a. Ya mere, anyị kwesịrị n'anya ma na-egboro anyị ụmụaka na anyị kwesịrị ịgbasi mbọ ike na anyị kwesịrị ọbụna na-achọ obi ụtọ, ọrụ anyị na-eme. Ma ọ dịghị nke ndị ka anyị kwesịrị ikpeazụ akpali. Ọ dịghị onye n'ime ndị kwesịrị isi ihe na-akpali anyị.
N'ebe a, Pọl kwuru otu ihe na-abụghị nke anyị onwe anyị na anyị dị n'ụwa-adị ndụ ruo akpali. Ọ arịọ ndị ha na anyị, ọ bụghị ihe anyị pụrụ imere ndị ọzọ, kama ọ bụ ihe Chineke mewooro anyị. Ọ arịọ ndị ha na anyị, site na obi-ebere nile nke Chineke.
Ya mere, mgbe Pọl na-ekwu obi ebere nile nke Chineke, ihe nwere ike o bu n'uche?
Paul nwere ike na-eche echiche nke dị ebube Gospel Chineke nyere anyị. n'ihi na 1:16, Pọl na-ekwu na nke a Gospel bụ, "Ike nke Chineke maka nzoputa, mbụ ka onye Juu na mgbe ahụ ka Greek. "
Ma ọ bụ ọ pụrụ ịdị na-eche nke isi anọ, ebe ọ na-ekwu, "Ngọzi na-adịrị onye mmebi iwu gbagharawo, na onye mmehie na-ekpuchi; nāgara nke-nwoke megide onye Jehova na-agaghị gụọ mmehie ya. "
Ma ọ bụ ma eleghị anya, ọ na-eche echiche banyere isi ise ebe ọ na-ekwu, "Chineke na-egosi anyị ịhụnanya ya na ka anyị nọ ka ndị mmehie na Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."
Ma ọ bụ ọ nwere ike na-eche echiche nke isi asatọ ebe ọ na-agwa anyị na, "Chineke mere ihe iwu na ike gwụrụ ha nke anụ ahụ na-apụghị ime. Site n'izite ya nwa…"
Ma ọ bụ m maa ọ nwere ike na-eche echiche nke isi itoolu, ebe ọ na-agwa anyị "na nzọpụta adịghị adabere na mmadụ exertion, kama na Chineke na-emere ebere "
M na-eche na Pọl nwere niile nke ndị a mara mma eziokwu banyere ebere Chineke n'uche ebe a.
Chineke nyere anyị ebere, ọ na-enye anyị ebere, na Ọ ga-enye anyị ebere. Anyị ga-akpali ọ bụghị naanị site n'ebere anyị na-ama natara, ma site n'ebere anyị ga-enweta.
Na Paul na-ekwu na ìhè nke na ebere, ebe a bụ otú ị na-ebi. Anyị bụ ndị ana-akpali, chụpụrụ site na ebere.
Ya mere, anyị na-chụpụrụ site agụụ iri ihe, na ụfọdụ na-chụpụrụ site a ọchịchọ-adị ukwuu na-arụ ọrụ ike karịa onye ọ bụla ọzọ. Ya mere, ọ bụrụ na Ndị Kraịst bụ ka a chụpụrụ site obi ebere nile nke Chineke, ihe kwesịrị ndị a ebere nile na-amanye ha?
II. A chụpụrụ ha na-efe
Enyefe ahụ unu dị ka a bi àjà, nsọ na nke dị Chineke mma, nke bụ ime mmụọ gị ofufe. (Ndị Rom 12:1b-d)
Ma mgbe Pọl na-agwa ndị Rom na-ewetara ha dị ka àjà, asụsụ ọ na-eji na ọwọrọ gosi ha azụ ka Old Testament ofufe na chụọ àjà usoro. Ya mere, ka okwu banyere na nkenke
a. Old Testament Background
Chineke dị nsọ. Man adịghị. E kwesịghị ịma nwoke na-na ọnụnọ Chineke ma ọ bụ na-ekpeku ya n'ụzọ ọ bụla, ma Chineke bụ amara ezu na-achụso otu ìgwè nke mmehie, Israel, na-ekwe ka ha nwee mmekọrịta na Ya. Kama n'ihi na ọ bụ nsọ na ha na mmehie, ha nwere ike a gaghị ekwe ka dị nnọọ-ekpegara ya ekpere ọ bụla ochie. Ha apughi ifè Ya ka ha ga-arụsị na chi ụgha ha na-efe. Ọ bụrụ na ha na-aga na-efe Chineke, ọ ghaghịkwa ịbụ na Ya okwu. Nanị ihe ha pụrụ ekpegara ya ekpere n'ụzọ Ọ ẹkenịm na-ekwe.
Ya mere, ke ama akafak ndị a ndị mmadụ, Chineke nyere ha iwu ndị ha ma nye ha iwu siri ike ụkpụrụ nduzi maka ofufe. Chineke gwara ha na-ewu a ụlọikwuu ahụ na o nyere ha chụọ àjà usoro. O nyere ha iwu siri ike iwu ka otú ha pụrụ ịkpọrọ Ya na ijere ya ozi. The gbuo àjà ụmụ anụmanụ bụ nnukwu akụkụ nke Old Testament ofufe. All nke ndị Chineke nye ha iwu ka ebu ndị a n'àjà iji ịgakwuru Chineke.
Site n'àjà ndị a, ha kwetara mmehie ha na mkpa mgbaghara na àjà chetaara ha na Chineke ịdị nsọ. Ụmụ anụmanụ ndị a e bu n'uche na-egosi ndị na mgbe ha na-emehie, ọnwụ bụ ntaramahụhụ. The ụmụ anụmanụ nwụrụ kama ha. The achụ ịbụ akụkụ nke a ndụ biri na-erubere Chineke.
Ya mere, na ebe ha nwere ike izute na Chineke bụ ebe-obibi (a obere ụlọikwuu Chineke biri) na mgbe e mesịrị ụlọ nsọ. N'ezie Chineke bụ n'ebe nile, ma nke a bụ ihe O guzobere. Ọ gwara ha, ị fèm, n'ụzọ nke a, n'ebe a. Ya mere, mgbe Pọl na-ekwu na anyị na-ahụ anyị dị ka Chineke dị ka a bi àjà, ọ ga-echeta nke a chụọ àjà usoro.
Ọma na NT na-eme ka o doo anya, na àjà ndị a na mgbe ihe pụtara na onye na-adịgide adịgide. Ha e bu n'uche ka arụtụ aka kacha àjà, Jesus. Yiri ụmụ anụmanụ, na ga-adịkwa ọcha, Jizọs bụ àjà zuru okè maka mmehie anyị. Ndị Hibru na-agwa anyị na a kacha àjà bụ otu ugboro-for-niile. Ọ dịghị mgbe a ga-ugboro ugboro. O we guzo n'ebe anyị na, na O nwuru kama ayi. Ma n'adịghị àjà ụmụ anụmanụ, Jesus bilie amara ụbọchị atọ gasịrị, ndikan iro anyị. Ya mere, na-abịanụ nke Jizọs, ochie a chụọ àjà usoro na-arahụ.
The ọbịbịa nke Jesus-agbanwe ofufe Chineke ruo mgbe ebighị ebi. Otu n'ime ndị kasị amasị m atụ nke a bụ na Jọn isi iri anọ na nwaanyị ahụ nke ọma.
Nwaanyị ahụ wee sị ya, "Sir, Ana m aghọta na ị bụ onye amụma. Nna anyị hà fere ofufe n'ugwu a, ma unu na-ekwu na na Jerusalem bụ ebe ndị mmadụ kwesịrị ịnọ fee Chineke. "Jizọs sịrị ya, "Nwaanyị, kwe m, na oge awa na-abịa mgbe ọ na n'ugwu a ma ọ na Jeruselem ka unu ga-efe Nna. Unu na-efe ihe unu na-amaghị; anyị na-efe ihe anyị maara, n'ihi na nzọputa si n'etiti ndi-Ju. Ma oge awa na-abịa, na ọ bụ ugbu a, mgbe efe ezi ofufe ga-efe Nna nime mọ na ezi, n'ihi na Nna m na-achọ ndị dị otú ahụ fee ya ofufe. Chineke bụ mmụọ, na ndị na-efe ya aghaghịkwa ife ofufe n'ime mmụọ na n'eziokwu. " (John 4:19-24)
A nwaanyị na-eche na n'ihi na Jizọs bụ onye Juu, ọ chọrọ ya na-efe na Jerusalem na ụlọ nsọ. The temple bụ, n'oge a, ebe Chineke hapụrụ ndị na-ekpegara ya ekpere. Ọma Jesus na-eme ka o doo anya na ya na ọnwụ ya, a ọhụrụ oge na-abịa.
Anyị agaghịkwa nwere izute na Chineke na otu ebe na a akpan akpan anụmanụ na-achụrụ. Anyị nwere ike izute na Chineke n'ebe ọ bụla! Na onwu nke Jesus, ndị ahụ na-ewepụ ya. Jesus abụghị nanị àjà, ma Ọ bụ ọhụrụ temple ebe àjà-eme. Ebe anyị ga--efe Chineke bụ na Christ. Tụkwasị n'ịbụ àjà, na ụlọ nsọ, Jizọs bụ anyị nnukwu onye nchụàjà. Ọ bụ anyị ụzọ Chineke.
Ya mere unu adịghị mkpa a nchụàjà, ma ọ bụ anụmanụ, ma ọ bụ a ụlọ na-efe Chineke. Niile ị chọrọ bụ Jesus! Ọ bụrụ na ị bụ ebe a taa na unu amaghị Jesus, Achọrọ m agba gị ume ichegharị ma kwere.
-Anyị bodiesThe a kwuru, sị anyị ga-ahụ anyị dị. Ugbu a, m na-eche na pụtara na anyị naanị Chineke anyị n'ụzọ dị. M na-eche Paul pụtara n'ụzọ bụ isi, anyị na-adịghị na-enye akụkụ nke onwe anyị, ma anyị dum selves ruo Chineke. Anyị dum onwe bụ àjà na anyị nwere ike na-enye. Anyị na-ewetara anyị ndụ, anyị na-, anyị niile Chineke.
E nwere ụdị dị iche iche nke onyinye. Ụfọdụ n'ime y'all ma eleghị anya, gụsịrị akwụkwọ na nso nso wee ngụsị akwụkwọ onyinye. Ha bụ ụfọdụ onyinye na-nyere dị ka agwụ na onwe ha, dị ka ụmụaka. The dum isi nke na o ji egwuri egwu bụ nke mere na ha nwere ike iji na-egwuri egwu,.
Mgbe ahụ e nwere a abụọ ụdị onyinye. Onyinye ndị a na-e nyere dị ka ụzọ isi ihe ọzọ. Ya mere, e nwere ụfọdụ n'ime unu na ebe a na gụsịrị akwụkwọ na nwetara ego hiri dị ka onyinye. ugbu a, ihe ọ bụrụ na ị na-emeso ndị na Ego onyinye dị njedebe n'ime onwe ha? Gịnị ma ọ bụrụ na ị na-eji ndenye ego na ego dị ka akwụkwọ ahụaja? Nke ahụ ga-a n'efu na-enye n'anya ga-ewe iwe.
Ndụ gị bụ na nke abụọ ụdị onyinye. Ọ na ọwọrọ abụ a iji na njedebe nke ofufe Chineke.
Dị ka a Christian, ị dịghị mgbe a ga nyere akpa ụdị onyinye. Ọ bụla otu onyinye ị ga-esi, na ọwọrọ ga-eji ihe dị ka ụzọ ọzọ ọgwụgwụ. Na njedebe bụ na ị ga na-efe Chineke na ndụ gị.
b. Nsọ na Chineke Ezi Mma
Paul na-ekwu na ndị a bi àjà bụ ka ndị dị nsọ na nke dị Chineke mma. Kedu ihe nke ahụ pụtara? Na Old Testament àjà, Chineke nwere kpọmkwem ụkpụrụ nduzi. N'ihi na àjà o kwesịrị ịbụ a dị ọcha anụmanụ, na onye ahụ na-chegharịrị echegharị na njikere irubere Chineke, etc.
Ya mere, ka anyị, anyị na-àjà onwe anyị dika aja di ndu. Ya mere, olee otu anyi ga-enye onwe anyị? Chineke nyere ụkpụrụ nduzi maka otú ndị Kraịst bụ ugbu a na-ebi ndụ. Ọ na-gwara anyị ka anyị na ụdị ndụ ahụ ga-abụ atọ Ya. Ọ bụrụ na anyị anya na ndị ọzọ n'isiakwụkwọ a kpọmkwem, anyị na-ahụ Paul amalite dina ihe na-anya dị ka.
na amaokwu 3-8 o kwuru okwu banyere iji onyinye ime mmụọ maka ezi nke ndị ahụ nile na-. Na na amaokwu 9-21 ọ na-agba ume na Rom ka ha hụ ibe, na-akụziri ha ka ha dịkwa na-emekọ ihe ọ bụla ọzọ n'ozuzu.
Anyị na-ahụ a na Ndị Efesọs 4 mgbe Pọl na-enye a otu ụdị ụgwọ. Ọ na-ewepụta ozizi na Ndị Efesọs 1-3, mgbe ahụ, n'isi 4 ọ na-eme otu ihe ahụ. Ọ na-amalite na-agwa ha otú ha ga-ebi ndụ.
Ọ gwara ha ka ha na-agbalịsi ike ịdị n'otu na ọ gbara ha ume, na Chineke nyere ha dị iche iche onyinye n'ihi na ụlọ elu nke ahu. Na o kwuru okwu banyere ozu-arụ ọrụ ọnụ na-ewulikwa ibe anyị elu.
Community. M ike nyere aka, ma na-achọpụta na ma ndị Rom ma Efesọs, Paul amalite site na-ekwu okwu ka aru ndụ. Ị nwere ike ghara-enye gị ndụ ya dị ka àjà dị ka ị ga-, mgbe ndụ na-akpa iche. Na-eleghara Chineke ụka bụ na-eleghara uche Chineke maka ndụ gị.
Ndị ọ na-n'amaokwu 17-29 ịgba ha ume ibi ndụ n'ụzọ kwekọrọ na ihe ha na-akụziri ma na-agbaghara ka ha na-na na na na a gbagharawo. Ọ aga na na na na isi 5.
Chineke akpọwo anyị ka anyị ịdị ka ya, nke pụtara ịdị nsọ. Ọ na-gwara anyị ka anyị "dị nsọ dị ka m nsọ." Ma otú mgbe ndụ anyị anya ndị na-abụghị nke nsọ. Ma m nwere ụfọdụ agbamume n'ihi na unu…
"Ya mere,, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nke dị n'ime Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ. The ochie agabigawo; le, ọhụrụ eruwo. " (2 Ndị Kọrịnt 5:17)
Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị hụrụ nwa ọhụrụ na-agwa ha nna na ihe na-eme? Crawling gburugburu a ụlọ ịtụ ndị mụrụ ha gburugburu? Ị ga-eche na ha bụ ndị crazy! Gịnị mere? N'ihi na ha bụ ndị nne na nna, ma ha na-eme ka nwa. Ọ bụ mwute mgbe ndị mmadụ nwere ụfọdụ ike, ùgwù ma jụ eje ije na ya. Ọ bụ ọbụna crazier maka a Christian-ebi ndụ mmehie. Mgbe Chineke zọpụtara anyị, anyị nọ na-ejikere ịlọ ụwa. Chineke mere ka anyị kacha ọhụrụ e kere eke. Anyị nwere nabatara na a. Ọtụtụ n'ime anyị ka na-ele onwe anyị dị ka nnọọ mmehie. Anyị bụ ndị mmehie, ma anyị nwere ihe karịrị mmehie. Ụzọ ihe karịrị ị ga-ahụ na Bible na-akpọ anyị ndị mmehie, ị ga-ahụ na Bible na-akpọ anyị nsọ na Ụmụ Chineke na òtù ndị nchụàjà bụ na n'onye ezi omume.
Mgbe ị na-emehie, ị na-agaghị ịbụ onye ị bụ ugbu a. Ị na-aga azụ ka onye ị na-abụrụ. Ọ bụrụ na ị na-agụ New Testament akwụkwọ ozi, ị hụrụ ihe bu na ndi ozi na-mgbe na-agwa ndị Kraịst ka ha kwụsị aga azụ ha ochie. Ha na-echetara ha na nke ahụ abụghị onye na ha bụ ndị ọzọ.
Ya mere, e nwere ike ịbụ a n'ime ụlọ a n'ezie jụ irubere ndị mụrụ ha. Chineke na-akpọ gị irubere ha isi ma na-edo onwe ha n'okpuru ha. E nwere ike ịbụ a na-nwere otutu akpali agụụ echiche. Chineke na-akpọ gị ka ha hapụ na na-adị ọcha n'uche. E nwere ike ịbụ onye na-n'ezie bụ na-ewe iwe mmadụ. Chineke na-akpọ gị ka abụ ịhụnanya na-eme amara, na-agbaghara. Ọ bụ adịghị ezu na-dị nnọọ na-ụka. Chineke na-akpọ gị ịdị ka Kraịst.
Na Chineke enyewo anyị na-ebi ndụ ndị a iche iche ndụ.
c. ezi uche Service
Na dị ka Paul, a Ụdị ofufe dị anyị ezi uche ọrụ. Ị hụtụwo ndị fim ebe onye na-azọpụta onye ọzọ ndụ ma emesia ha dị nnọọ na-eso na ha niile n'ụbọchị ụbọchị ọ bụla? dị ka matriks 2. Ọma anyị omume Chineke maka ebere ya kwesịrị buu na oké nakwa.
Ọ bụrụ na ị nye m dollar m nwere ike ọchị, ma ọ bụrụ na ị na-enye m ọhụrụ uwe elu Aga m eleghị anya ịma jijiji aka gị, ọ bụrụ na ị ga-esi m akwụkwọ ọhụrụ m ike mkpu Halleluyah. Ma ọ bụrụ na ị gbapụta m si m na mmehie m na-ekwe nkwa m unearned ndụ ebighi ebi, nanị ò omume na-enye gị ndụ m nile. Nke ahụ bụ m ihe ezi uche na ọrụ.
d. All nke Ndụ
Ya mere, nke a bụ ihe anyị ga-amanye m. Anyị dum ndụ kwesịrị a ndu àjà chụrụ Chineke.
Ụfọdụ n'ime anyị na-chụpụrụ na omenala uche nke okwu. Anyị chọrọ ịga nke ọma; anyị chọrọ ịrị n'ọkwá. Ma nke ahụ bụ ezi ihe. Ma i kwesịrị ijide n'aka na ị na-egweri nke ọma. Ị na-eji gị ịga nke ọma na ọnọdụ? Ka ị na-echegbu ya na-efe Chineke?
Na onye ị na-egweri maka? Ụfọdụ n'ime anyị na-arụ ọrụ nnọọ ike, na anyị na-chụpụrụ site a mkpa anyị nkwado nke ndị mụrụ. Ma ọ bụ ụfọdụ n'ime anyị Mike otú anyị anya ọma maka ndị enyi anyị. Na ụfọdụ n'ime anyị na-arụ ọrụ otú ike dị nnọọ na-amasị anyị. Ma lee anya anyị na-ekwesịghị-egwe na àjà anyị ikwo ihe ezinụlọ anyị, ma ọ bụ anyị na chọọchị, ma ọ bụ anyị onwe anyị. Anyị Mike maka Chineke. Anyị na-àjà anyị na-ejere Ya. Ọ bụrụ na ị na-àjà gị ọrụ bụ isi ọ bụla onye ọzọ karịa Chineke, ị bụ ikpe mara nke ikpere arụsị. -efe Chineke, ọ bụghị nwoke ma ọ bụ ihe ọ bụla o nwere ike inye.
Ihe ọ bụla ị na-eme, -arụ ọrụ eji obi, dị ka n'ihi na Jehova na ọ bụghị ndị mmadụ, ebe ọ maara na site na Jehova ị ga-enweta ihe nketa dị ka ụgwọ ọrụ unu. Ị na-efe Jehova Christ. (Ndị Kọlọsi 3:23)
Na nke N'ezie ihe mkpali maka nke a àjà bụ ebere nile nke Chineke. Ihe nke atọ nke anyị na-ahụ a na-ekwu na anyị kwesịrị ịgbanwe.
a. Unu o kwekọọ
Ụmụnna anyị a na-akpọ si n'ụwa nke a. Mgbe Paul okwu banyere "ụwa" ebe a, ọ na-ezo aka n'ụwa na ụzọ ọjọọ nke ụwa anyị bi na. Ọ na-ekwu okwu banyere mmehie mode nke ọrụ na anyị na-eji na-ahụ ihe niile nọ anyị gburugburu. Nsụgharị ndị ọzọ na-ekwu na "onyinye afọ."
Onyinye afọ anyị bi na nnupu isi n'ebe Chineke. Ọtụtụ n'ime anyị ka na-eche nke ụwa a dị ka Enyi anyị bụ ndị dị nnọọ chọrọ ụfọdụ enyemaka. nnọọ bụghị. Anyị kwesịrị ịtụle ụzọ nke afọ na-onye iro anyị. Na anyị kwesịrị ịtụle nke dị ka ndị nke Chineke anyị na-enwe ìhè nke a ụwa na ụzọ ya, na anyị na-enwe nkwusa nke Good News na-azọpụta.
Anyị na-adịghị na-agbalị iji nke ụwa metụta. Ọ dị nnọọ itịbe. Ha imetụta anyị si eche echiche na-enweghị anyị na-agbalị. A ezi ihe nlereanya nke a bụ na-ekpo ọkụ nsogbu dị ka nwoke idina nwoke. Ụbọchị ọ bụla anyị anya elu steeti ọzọ bụ ikwe nwoke nwere mmasị nwoke alụmdi na nwunye. Na media, na ụbụrụ na-aghọ, na echiche ndị isi na-niile pushing maka nnabata nke nwoke idina nwoke. Ha nile na-arụgide anyị ka anyị na-ekweta na ha na imebi omume anyị stance. Ha ga-ekwu okwu banyere anyị, -akwa anyị emo, ma na-emeso anyị dị ka bigots ruo mgbe anyị kweere. Ụwa push dị ike. Ọ bụ a nnọọ ike ugbu a. Ma anyị na-enweghị ka ise n'elu na ugbu a. Chineke akpọwo anyị ka anyị gaa buso ugbu a.
Nwoke idina nwoke bụ mfe. Gịnị banyere ịchọ ọdịmma onwe, ma ọ bụ anyaukwu, ma ọ bụ nganga? Ndị na-ahụ ụzọ nke ụwa, bụghị Chineke. Na anyị na-apụghị o kwekọọ ụwa.
Ka anyị leba anya ná Ndị Kọlọsi 3. Nke a bụ ihe ọzọ n'akwụkwọ ebe Pọl na-ewepụta Gospel ozizi, mgbe ahụ akọwa na-agwa anyị otú anyị kwesịrị ibi ndụ na ìhè nke na. Ya mere na nke mbụ isi abụọ Pọl na-akọwa miri emi stof, mgbe ahụkwa ọ na-agwa anyị otú e kwesịrị imetụta anyị.
b. Kama gbanweenụ site The adịkwa ọhụrụ nke Your Mind
Kama ịbụ kwekọọ ihe ụwa na-eme, anyị kwesịrị ịgbanwe. Na n'ụzọ anyị si na-agbanwe bụ site uwak uche anyị.
Ọ rụrụ ụka maka ha na-ebi ndụ dị iche iche, dabere na ihe Chineke mere…
Chineke chọrọ ka anyị gbanwee. Na nke a bụ ihe na mgbanwe anya dị ka. Ya anya ka etinye ọnwụ ihe n'ụwa na anyị, na-etinye on Chineke e ji mara.
c. Na-adịkwa ọhụrụ Your Mind
Ma, olee otú anyị nwere ike isi gbanwee ma na-etinye on atụ Egwu Chineke e ji mara. Pọl na-ekwu n'ụzọ doro anya, "Site uwak obi gị."
Anyị na-adịghị achọ ịnụ stof dị ka nke a. Ma uche anyị mkpa inweta ọhụrụ. Anyị si eche echiche mere anyị ime uche, na iche echiche anyị kwesịrị ịgbanwe. Anaghị m pụtara dị ka mgbe ị na-ekwu, "Amaara m na m na-kwesŽrŽ ime ihe ziri ezi, ma…"Ọ dịghị nke dị eme mmehie echiche na kwesịrị na-gbanwere. Anyị anụ ahụ eberede kwupụta aga na nke ugbu a na ọ na-achọ ohere mehie. Na n'anụ ahụ unu bụ naanị mere ka esemokwu ahụ ụwa na ekwensu.
Uche anyị mkpa ka a ọhụrụ ọ bụla otu ụbọchị. Olee otú anyị ime nke a? Anyị eme uche anyị site n'iburu Chineke si eche echiche n'ihu anyị. -Adị kwa ụbọchị na anyị na-anụ ụgha mgbe ụgha mgbe ụgha obi anyị, na ụwa, na ekwensu. Dịsi anyị mkpa eziokwu Chineke mbuso ụgha ndị ahụ.
d. Sia eyenete Ka Chineke
Ihe mgbaru ọsọ nke mgbanwe a na-inwe ike ịghọta ihe bụ uche Chineke. Uche Chineke na uche Chineke ga-nanị ya pụrụ iduga gị n'ibi ndụ na-atọ Ya. Ị na-ahụ na ọ na-akọwa uche Chineke dị ka ezi ihe na nke zukwara okè. Ka ị na-eme gị obi, na ahụmahụ gbanwee ndụ, ị ga-enwe ike ịhụ ịdị mma nke Okwu Chineke. Na ị ga-enwe ike ịhụ na ọ na-edu gị ná ndụ na na a ndụ na-amasị ya.
M na-echeta na oge mbụ ka Okwu kụrụ m. M na mgbe kemgbe otu ebe.
Ya mere, e nwere ụfọdụ n'ime anyị ndị na-elu ilu na-adịghị agbaghara. Nke ahụ bụ ụwa. Ị na-sụgharịa ka uzọ nile nke ụwa. E nwere ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị jupụtara agụụ ihe ọjọọ na-etinye aka ná mmekọahụ rụrụ arụ. Nke ahụ bụ ụwa. Ị na-sụgharịa ka uzọ nile nke ụwa. E nwere ndị ka ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị dịpụrụ adịpụ. Anyị abụghị akụkụ nke a na chọọchị, otú ahụ ka anyị na-eche anyị onyinye onwe anyị ma ghara iwuli elu ahụ. Kama anyị na-ewuli onwe anyị elu. Nke ahụ bụ ụwa.
Anyị ga-esi n'aka ndị na n'uzo nke uwa, na gbanweenụ site na-uwak uche anyị. Na ọ bụrụ na anyị ga-agbanwe, anyị ga-ahụ na ịdị mma nke Chineke na-.
Ndị Kraịst anyị nwere ike nwewa-adị ukwuu basketball egwuregwu, ma ọ bụ oké ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụ oké rappers. Ma ihe ndị ahụ n'onwe ha nwere ike ịbụ ihe ụgbọala anyị, na ha na-adịghị emecha ihe anyi ga na-amanye m. Ọ bụrụ na ị na-aiming maka ihe nke ụwa ibi n'ụwa ịga nke ọma, ị na-aiming ka ala.
Anyị na-na-chụpụrụ site n'ebere Chineke, chụpụrụ na-efe Chineke, na anyị bụ ndị na-gbanweenụ site n'Okwu Ya. Ka anyị ikpe ekpere.
PhillipBavilla • April 16, 2014 na 3:11 pm • zaghachi
M mmasị na ozizi na ị dị nnọọ nwere, ma ọ bụ ma ọ bụ mgbe ọ bụla i kwuru eziokwu. dị ka m na-agụ, i huru otutu ihe na m dị hụrụ onwe m na-eme, ma i na-adịghị eme ya naanị, Christ bụ nanị ụzọ, Dị ka John 14:6, na mgbe ọ bụla nsogbu abịa gburugburu, Kraist bụ nanị ike na i mkpa mgbe ọ bụla, dị ka Pọl kpọrọ aha ná Philipians 4:13. ma i dịtụ dị nwetara a ihe a Gospel RAP stof, na m ka a chụpụrụ site Kraịst ịbụ obi Ya na ihe ọ bụla ọnọdụ, ma ya na ụwa, ma ọ bụ na ya nọ n'Ụlọ Chineke na-eme a ozizi ma ọ bụ a ntinye. M ekpe ekpere maka nkwuwa okwu, na im na-eme m kasị mma inwe ndidi.
Liam • August 19, 2014 na 7:14 pm • zaghachi
Awesome, egwu post njem. Nọgidenụ na-em-abịa ma na pumped maka ọhụrụ album
Lawrence • August 27, 2017 na 8:42 pm • zaghachi
Always aka. ekele.